Loza nahatsiravina teny Andoharanofotsy : maty notetezin’ny kamiao ilay tovovavy | NewsMada
Loza nahatsiravina teny Andoharanofotsy : maty notetezin’ny kamiao ilay tovovavy
Maty tsy tra-drano, notetezin’ny kodiaran’ny kamiaobe ity tovovavy iray, tokony ho 30 taona, omaly, teny Andoharanofotsy. Vokatry ny fahateren’ny lalana, noho ny fahamaroan’ireo mpivarotra amoron-dalana no nahatonga ity loza nahatsiravina ity.
Araka ny fanazavan’ny olona teny Andoharanofotsy, nisongona taxi-be iray teo amin’ny Pharmacie ilay kamiao, ka nahafaoka ilay vehivavy nandeha tamin’ny sisin-dalana, omaly hariva tamin’ny 4 ora hariva. Notetezin’ny kodiarana izy, ary voatarika tany amin’ny 5 metatra vao tafajanona ny fiara.
“Toy ny tsy hitan’ilay mpamily akory ny fisian’ilay vehivavy voadonany, fa ny olona no niantsoantso vao fantany fa nanitsaka olona izy”, hoy ny fitantaran’ny nahita maso ity loza ity. Tsy nisy azo natao intsony momba ilay vehivavy io, nijininika ny ra. Nitangorona ny olona teo anoloan’izany, ary maro no nitabataba avy hatrany. Niala teny an-toerana ny mpamily ilay kamiao, ary nanatona ny zandary Andoharanofotsy. Notanana avy hatrany izy io.
Tapaka nandritra ny ora vitsy mihitsy ny lalana teo Andoharanofotsy noho ity loza ity. Tery rahateo ny arabe eny an-toerana, ka sahirana ny mampiasa lalana. Ny olona nitangorona rahateo, izay nalamin’ny zandary mba tsy hikorontana.
Olana mampitabataba ny arabe eo Andoharanofotsy
Tery loatra ny lalana eo Andoharanofotsy tsena. Efa namoahan’ny kaominina lalàna izy io, ny hanalana ny mpivarotra amoron-dalana rehetra eny an-toerana, mba hanalalahana ny lalana. Ny herinandro teo, niroso tamin’ny fanalana ireo mpivarotra manamorona ny arabe ny kaominina sy ny mpitandro filaminana, saingy nivadika olana izany satria notoherin’ireo mpivarotra ny fanalana azy. “Iaraha-mahalala ny fahateren’ny lalana ary efa misy ny toerana ho an’ireo mpivarotra saingy tsy mety mankeny an-toerana ireo. Efa misy ny fifampidinihana”, hoy ny ben’ny Tanàna ny herinandro teo.
Ity tranga omaly, anefa manaporofo fa tena tery ny lalana, ary efa matetika ny lozam-pifamoivoizana eny Andoharanofotsy eny. Zara fa misy andehanana ny mpandeha an-tongotra, ary midina amin’ny arabe aza. Sarotra anefa ny fandaminana ny mpivarotra, hatrany Andoharanofotsy, ka hatrany Analakely…